Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Boeing Dreamlifter dia mampita saron-tava 1.5M
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • fanabeazana • fampiasam-bola • Vaovao • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Boeing androany dia nahavita iraka fitaterana COVID-19 iray hafa, nampiasa Boeing Dreamlifter hitondrana fitaovam-piarovana manokana (PPE) avy any Hong Kong ny Etazonia. Miara-miasa amin'ny Fahasalamana Prisma, Atlas Air Manerantany ary Discommon Mpanorina Neil Ferrier, ny orinasa dia nitatitra sarontava tarehy miisa 1.5 tapitrisa ho an'ny mpitsabo amin'ny Prisma Health ao South Carolina.
Discommon, mpanafatra rakitra ho an'ny fandefasana, dia niantoka ny famokarana ny PPE tamin'ireo mpamokatra matoky ao Shina ary nitodika tany Boeing hanamorana ny fitaterana mankany amin'ny Prisma Health, ny rafitra fitsaboana lehibe indrindra ao South Carolina. Boeing dia nanome ny saran'ny fitaterana ny iraka, miaraka amin'ny Atlas Air miasa ny sidina amin'ny anaran'ny Boeing.
Ny Dreamlifter, Boeing 747-400 Large Cargo Freighter niova fo, dia nanidina avy tany Hong Kong ny Greenville, South Carolina, miaraka amin'ny saron-tarehy amin'ny masony ambany. Aorian'ny fandefasana, ny Dreamlifter dia hiverina any amin'ny fonenany any North Charleston, South Carolina, ary manatitra ampahany 787 Dreamliner ho fanohanana ny rojom-panolorana seranam-piaramanidina manerantany.
Fanohanana ho an'ny mpitarika
“Folo taona lasa izay, tonga i Boeing South Carolina - manambola loharanon-karena lehibe amin'ny toekarentsika ary mamorona asa ho an'ny olona. Androany, Boeing dia manao famatsiam-bola lehibe hafa amin'ny fanjakantsika amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny hafa South Carolina orinasa hanampiana amin'ny ady atao amin'ity virus mahafaty ity. Ny Carolinians tatsimo dia miavaka amin'ny fangoraham-po sy fifampitsinjovana. Ireo orinasa niaraha-miasa mba hahatanteraka ity asa ity dia fampisehoana ireo toetra ireo ary manana trosa feno fankasitrahana isika tsirairay avy. ” - South Carolina governora Henry McMaster
"Adidintsika amin'ny lehilahy sy vehivavy eo amin'ny laharana voalohany amin'ny rafitra fitsaboana mba hanana loharano ilaina hiadiana amin'ny virus COVID-19. Te hisaotra ny Prisma Health, Discommon, Atlas Air ary Boeing aho noho ny fiakarana mba hanamorana ity fandefasana sarontava sarontava tena ity ho South Carolina. " - Sen. Lindsey Graham
“Ny ady amin'ny COVID-19 dia nitaky valiny mbola tsy nisy toy izany avy amin'ny ambaratongam-pahefana rehetra, ny sehatra tsy miankina ary ny fianakaviana amerikana. Iray amin'ireo fanamby goavana atrehin'ireo vondrom-piarahamonina manerana ny firenena ny fiantohana ireo mpiasan'ny fitsaboana eo alohanay mba hanana fitaovana fiarovana manokana mba hahafahan'izy ireo mitsabo marary sy mitazona ny tenany ho salama. Ity fiaraha-miasa amin'ny daholobe miankina amin'ny White House, Boeing, Discommon ary Atlas Air ity dia nanapaka ny olan'ny famatsiana sy ny red tape mba hitondrana sarontava kilasy fitsaboana 1.5 tapitrisa South Carolina ary handeha lavitra amin'ny fitandremana ireo mpitsabo matihanina ho voaro. Manolotra fisaorana feno ho an'ireo rehetra voarohirohy aho. ” - Sen. Tim Scott
“Vaovao be ny fanaterana sarontava fitsaboana ho an'ny Prisma Health! Ny fanjakana Palmetto iray manontolo dia misaotra an'i Boeing, Atlas Air, ary Discommon Concepts tamin'ny fanaovana an'ity fandefasana ity ho tena izy mba hamatsiana ireo mpitsabo anay mandritra ireo fotoana mbola tsy nisy toa azy ireo. Fiaraha-miasa toy ireny notarihin'ny orinasa any South Carolina izay hiantoka antsika ho vonona tanteraka handresy ny COVID-19. ” - Rep. Jeff Duncan (SC-03)
“Androany, mandray am-pireharehana ny Boeing sy Atlas Air izahay Greenville. Rehefa nanatona ahy voalohany i Discommon tao Greenville, Fantatro fa ireto sarontava ireto dia hitondra fiovana lehibe ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamantsika ao amin'ny Prisma Health, izay eo amin'ny laharana voalohany miady amin'ny areti-mandringana COVID-19. Niasa avy hatrany izahay mba hahatanteraka izany. Ny fandefasana anio dia mampiseho ny tsara azo atao rehefa miaraka ny orinasa, ny tsy mitady tombombarotra ary ny governemanta. Ity PPE ity dia handeha lavitra ho an'ny olona eto Upstate sy manerana ny Midlands. " - Rep. William Timmons (SC-04)
“Fandresena fandresena ho an'ny South Carolina mpamatsy fahasalamana ary ohatra iray tonga lafatra amin'ny orinasa tsy miankina miasa amin'ny olom-boafidy hanampy ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny olona tompoin'izy ireo. Tena ankasitrahanay ny fanohanan'i Boeing mandritra izao fotoan-tsarotra amin'ny fiarovana ny famatsiana ilaina izao. Amin'ny fijoroana miaraka dia mijoro matanjaka kokoa isika rehetra. Ho fankasitrahana ny fandefasan'i Boeing ny vatsinay, manome 100,000 XNUMX amin'ireto maska ​​ireto izahay amin'ireo mpiara-miasa aminay University of South Carolina, izay eo akaikin'ny orinasa mpamokatra Boeing. ” - Mark O'Halla, filoha ary CEO, Fahasalamana Prisma
“Faly be aho fa anisan'ity tetik'asa ity - mendrika ny filma ny làlana mankany. Na dia nampivarahontsana aza ny dingana rehetra tamin'ity fizotran'ny lozisialy ity dia nahagaga ny Boeing sy ny Atlas Air, miaraka amin'ireo orinasa roa tonta 100% nanolo-tena hanatanteraka iraka fitaterana anio. Mahagaga izany South Carolina manana ny fanohanan'ny orinasa izay afaka manome ny fanohanan'izy ireo ny lozisialy fitaterana an'ity fanamby sarotra ity. Na dia tsy ao anatin'ny tranoben'ny kodiarana indostrialy sy ny famokarana indostrialy aza ity tetikasa ity, ny tanjona faratampony amin'ny famolavolana dia ny famahana olana amin'ny fomba kanto ary miara-mivory isika rehetra hanao izany. ” - Neil Ferrier, Mpanorina, Discommon
“Atlas Air dia voninahitra ho anisan'ity iraka lehibe ity. Misaotra an'ireo mpamaly lohalaharana izahay izay manohy manome ny filan'ny Carolinians atsimo. Ireo mpitsabo matihanina ao amin'ny Prisma Health System dia tsy nitsahatra ary tsy nahatanty, ary ny fitaterana ireo fitaovana ilaina ilain'izy ireo dia fomba kely iray isaorana azy ireo. " - John W. Dietrich, filoha sy CEO, Atlas Air Worldwide
"Faly i Boeing fa anisan'ity sidina manan-tantara ity hitondra PPE tena ilaina amin'ny mpiasan'ny fahasalamana South Carolina. Te-hanolotra fisaorana manokana ho an'ny ekipa Boeing sy ireo mpiara-miasa amiko Atlas Air aho noho ny zavatra nataon'izy ireo hanohanana ity iraka tena ilaina ity ary hiantohana ireo mpiasan'ny fahasalamana eo an-toerana manana ny fitaovana ilain'izy ireo mitsikera. " - Dave Calhoun, filoha sy CEO, Boeing
Raha te hamaky vaovao momba ny dia bebe kokoa momba ny tsindry Boeing Eto.